Araho ny hafainganam-pandehan'ny tranokala amin'ny Torbit Insight
Alarobia, Jona 6, 2012 Alatsinainy 1 Febroary 2016 Douglas Karr
Mihisatra miadana ny tranokala. Tsy afaka milaza aminao aho hoe impiry aho no nahazo an'ity hafatra ity nandritra ny taona maro rehefa niara-niasa tamin'ny mpanjifa aho. Zava-dehibe tokoa ny hafainganam-pandehan'ny tranonkala… afaka mampihena ny fitsangantsanganana izy, mitazona ireo mpitsidika hiditra hatrany, manome toerana tsara kokoa ny tranokalanao ao amin'ny Google, ary hitarika fiovam-po bebe kokoa. Tianay ny tranonkala haingam-pandeha… io no iray amin'ireo olana voalohany manafika amin'ny client anay (ary koa nahoana izahay no mampiantrano WordPress amin'ny Flywheel - rohy mpiara-miasa izany).
Mahazo naoty fa ny miadana ny tranokala mahasosotra satria mety hiorina amina olana an-jatony… ohatrinona ny fatran'ny bandwidth misy ny orinasanao, olona firy no mampiasa azy, ny fisintomana ambadika ataonao, ny mpitety tranonkala ampiasanao, mandeha ny add-on browser, na tranokala azo antoka, toerana anaovana ny domains-nao, toerana anaovana ny tranokala, firy ireo tranonkala hafa nobataina amin'ny mpampiantrano iray ihany, ahoana ny cache'ny mpizara anao ilay tranokala ary raha nizara loharanom-pahalalana miorina amin'ny alàlan'ny CDN ny anarana vitsivitsy.
Tsy azo atao ny milaza izay mety ho olana rehefa manantona antsika ny mpanjifanay ary manontany. Noho izany, mitsidika tranonkala toa anay izahay Pingdom ary mihazakazaha fitaovana hafainganam-pandeha ary porofoy amin'izy ireo fa ny olona rehetra ivelan'izy ireo dia tsy manana olana. Mazava ho azy, tamin'izay no niverina izy ireo ary nilaza taminay fa ny olona rehetra fantany dia manana olana ihany koa… sento.
Ary ny famakafakana ny hafainganan'ny pejinao amin'ny alàlan'ny Google Search Console (fizarana Labs) dia sangisangy… miankina amin'ny olona mihazaka baraingo iray hitatitra ny hafainganana. Tena tsy dia be loatra ny toerana azonao aleha mba hahazoana valiny marina. Sa misy? Torbit Insight dia fitaovana fandrefesana mpampiasa tena izy izay manampy mangarahara ao amin'ny tranonkalanao mety tsy hanome ny valiny fotsiny, fa koa vahaolana. Io dia ahafahanao manaparitaka sy manaparitaka ny mpitsidika anao sy ny tranokalanao hahita ny tena sary ny hafainganan'ny tranokalanao.
Torbit Insight manome metrika fandrefesana ny mpampiasa tena izy, mamela ny mpivarotra hanara-maso ny fotoana fandefasana pejy web ho an'ny mpitsidika tsirairay sy tsirairay. Ny fitaovana dia mandefa ny fampahalalana mba hanondroana pin-teboka izay tena miadana ny pejin-tranonkala ary nahoana. Ny vahaolana iray segondra dia manome ny angon-drakitra tena misy.
Ny fitaovana dia manome matrices intuitive toy ny fifandraisana misy eo amin'ny hafainganam-pandefasan'ny tranokala sy ny tahan'ny fihenam-bidy na ny tahan'ny fiovam-po, ny tatitra momba ny fotoana tena izy amin'ny fijerin'ny sarintany mivantana, ny histograman'ny fotoana fandefasan'ny mpampiasa ny metric toa ny mediana sy ny isan-jaton'ny isan-jato, ny fampitahana ny fahombiazany amin'ny lafiny samihafa. mpizaha sy jeografia ary sosokevitra namboarina momba ny fomba fanatanterahana tsaratsara kokoa, misy santionany 100 isan-jato. Ary raha manana tranokala WordPress ianao, dia afaka mifoha sy mihazakazaka haingana miaraka ny WordPress Plugin.
Amin'ity fampahalalana ity dia azonao atao izao ny mamantatra raha toa ka nahatonga ny tranonkalanao hiadana kokoa ny fanapariahana kaody farany teo, na mpiorina mavesatra loatra ny antony, na… porofoy fotsiny amin'ny mpanjifanao fa manao ny asanao ianao ary mandeha tsara ilay tranonkala.
Mahafinaritra ihany koa ny mijery ny ora ara-jeografika, koa!
Mety ihany koa ny vidiny. Ny kinova fototry ny Torbit Insight, ao anatin'izany ny santionany zato isan-jato hatramin'ny pejy 100 isam-bolana ary ny fitazonana data 1,000,000 andro, dia maimaim-poana tanteraka. Raha te hizaha ireo olana ianao, jereo ny fitsidihana tsara indrindra sy ratsy indrindra nataonao, na koa fanaraha-maso ny fiovam-po amin'ny fotoana laninao, mila fampivoarana ilay fitaovana.
Tags: flywheelgoogle webmasterpagespeedfanaraha-maso hainganafanaraha-maso hainganafamahana olana hainganatorbittorbit fahitanawpengine
Manokatra magazay Facebook ao anatin'ny 15 minitra miaraka amin'ny karama
Tokony hanamboatra rindranasa finday na tranokala finday ve ianao?
Jun 6, 2012 ao amin'ny 7: 54 PM
Misaotra an'ity fampahalalana ity Doug, azo antoka fa serivisy tena mahafinaritra ity raha jerena ny marika vidiny.
Jun 6, 2012 ao amin'ny 8: 20 PM
Miloka ianao @ twitter-353825851: disqus! Noheveriko ihany koa !!!
7 Jun 2012 amin'ny 9:34 AM
Tena tsy azonao atao ambanin-javatra ny lanjan'ny fotoana lanin'ny tranokalanao. Na dia tsara aza ny atiny sy ny endrinao, raha miakatra tsimoramora ianao dia ho very mpitsidika anao. Ireo milina fikarohana dia mankasitraka ireo tranonkala manome traikefa tsara an'ny mpampiasa.
9 Jun 2012 amin'ny 2:34 AM
Doug, Mahafinaritra ny mandre fa mampiasa Torbit Insight ianao ary mahita fa mahasoa. Misaotra tamin'ny lahatsoratra!